MeshLab: gadzirira 3D modhi yekudhinda neiyi app | Linux Vakapindwa muropa
mesh lab ndeye 3D mesh yekugadzirisa software iyo inotungamirwa kune manejimendi uye kugadzirisa kweiyi mhando yemahombe uye asina kurongeka meshes. Inosanganisira repertoire yakazara yezvishandiso zvekugadzirisa dhizaini yako, kugadzirisa, kuongorora, kupa, uye kushandura.
Uyezve, MeshLab chishandiso chinotakurika, open source, uye inowedzerwa. Nayo, iyo ichakubatsira iwe kugadzirisa chaiwo mamodheru ayo anowanzo kuve makuru uye anomuka kubva, semuenzaniso, mamwe ma 3D scans. Semuenzaniso, iwe unogona kuyera dhizaini ye3D uye woigadzirisa kune yako zviyero uye wozoipurinda neyako 3D purinda muhukuru hwakakodzera (chikero), nezvimwe.
MeshLab hapana mubvunzo mupepeti mukuru / gadziriso ye STL mafaera, asi inotsigirawo mamwe mafomati efaira. Semuenzaniso, unogona kushanda ne PLY, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, uye PTX (kuwedzera ku STL, iyo yandakatotaura, hongu). Ose anogona kuverengwa naye. Paunenge uchinyora nekuchengetedza mapurojekiti ako, inotsigira STL, PLY, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VMRL uye DXF. Naizvozvo, iwe hauzove nedambudziko rakawandisa maererano nekuenderana.
Iwe unotoziva kuti kune akawanda ma 3D modhi modhi anoenderana neGNU / Linux distro yako, senge RepRap, Lulzbot, nezvimwe.
Unotoziva kuti .STL (STereoLithography) fomati inogona kuve verenga nekupepetwa naMeshlab, uye inova imwe yeanonyanyo kuzivikanwa kana iwe ukashanda nemagadzirirwo e3D, sezvo ichigamuchirwa nemhando dzakawanda dzevadhindisi ve3D. Chaizvoizvo iyi yakareruka vhezheni yeCAD, iine mashoma ruzivo uye ine yekupedzisira geometry yakagadzirwa, yakapfupikiswa, yakagadziridzwa, uye yakadzikiswa kusvika padiki padiki.
Ndinoreva zvinhu zvisingafarire zvinonyangarika, senge maratidziro emufananidzo, chimiro chemukati, iwo mavara epamusoro pekupedzisa, ruzivo rwezvinhu zvemuviri zvechinhu, nezvimwe. Chete izvo zvinonyanya kukosha kune aya 3D ekudhinda makesi anosara: chimiro
Ruzivo uye kurodha Meshlab - Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » MeshLab: gadzirira 3D modhi yekudhinda neiyi app